How to prevent oily skin with kitchen utensils
အဆီပြန်ခြင်းဆိုတာက အလှဖျက်တဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ။ ရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်မှုန့်၊ သဲတို့ကြောင့် မျက်နှာပေါ်မှာ ဝက်ခြံ/အဆီပြန်ခြင်းတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
နောက်ပြီး သဘာဝအလိုအလျောက် အဆီပြန်တတ်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်လုံး မျက်နှာအဆီပြန်နေတာကို တားစီးဖို့နည်းလမ်းတွေကို ခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေနေတာလား။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး အိမ်မှာရှိတာလေးတွေနဲ့ အဆီပြန်ခြင်းကို ဖယ်ရှားကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ကြက်ဥအနှစ် မျက်နှာပေါင်းတင်ခြင်းက အရေပြားပေါ်ရှိ အဆီတွေကို အကောင်းဆုံးဖယ်ရှား ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဂွမ်းစလေးနဲ့ မျက်နှာပေါ်သုတ်လိမ်းပြီး (၁၅) မိနစ်လောက်နေရင် ရေအေးအေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေတဲ့အသားအရေဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှအပကို သဘာဝအတိုင်း ပေါ်လွင်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး ရေ (၈) ခွက်သောက်ပေးခြင်းက မိတ်ကပ်တွေရဲ့ အကူအညီမပါဘဲ လှပဖြူဝင်းတဲ့အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေနိုင်ပါတယ်။
ရေချိုးတဲ့အချိန် ဆပ်ပြာတိုက်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အညစ်အကြေးများအားလုံးကို ပြောင်စင်အောင် သန့်စင်မပေးနိုင်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် သန့်ရှင်းကြည်လင်ပြီး လှပတဲ့ အသားအရေလေး ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပုံမှန်ချေးချွတ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ကြိတ်ခြေထားတဲ့ ပန်းသီးအနှစ်၊ ချက်ထားတဲ့ အုတ်ဂျုံမှုန့် အနည်းငယ်၊ ကြက်ဥအကာတို့ကို ရောပြီး သံပရိုသီးအရည် အနည်းငယ်ညှစ်ထည့်ပါ။ မျက်နှာမှာသုတ်ပြီး (၁၅) မိနစ်လောက်ထားပါ။ ပြီးရင်ရေအေးလေးနဲ့ ဆေးချနိုင်ပါ။
ရေချိုးတဲ့အချိန်မှာလည်း ဆပ်ပြာတိုက်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အညစ်အကြေးတွေအားလုံးကို ပြောင်စင်အောင် သန့်စင်မပေးနိုင်ပါဘူး။ သန့်ရှင်းကြည်လင်ပြီး လှပတဲ့အသားအရေပိုင်ဆိုင်ဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပုံမှန်ချေးချွတ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ပြောင်းဖူးမှုန့် အနည်းငယ်ရောမွှေပြီး မျက်နှာအနှံ့သုတ်လိမ်းကာ မျက်နှာသစ်ပေးတာမျိုး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သဘာဝအုန်းဆီစစ်စစ်ကလည်း အလှဆီတွေထက် များစွာကောင်းမွန်ပါတယ်။
အုန်းဆီပုံမှန်လိမ်းပေးခြင်းက အသားအရေကို နူးညံ့စေပြီး တောက်ပဖြူဝင်းစေပါတယ်။ သဘာဝပစ္စည်း စစ်စစ်ဖြစ်ကြောင့် ဓာတ်မတည့်မှာကိုလည်း မပူရပါဘူး။
မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းထဲကို ပန်းသီးဗီနီဂါ (ဒါမှမဟုတ်) ဗီနီဂါအဖြူအနည်းငယ်၊ ဆပ်ပြာရည် အနည်းငယ်ထည့်ပြီး နှာခေါင်း၊ မေးစေ့ တစ်ဝိုက် သုတ်လိမ်းပြီး မျက်နှာ သစ်ပေးရင် အဆီတွေ သာမက ဆားဝက်ခြံတွေပါ ဖယ်ရှားပြီး သားဖြစ်စေပါတယ်။ အသားအရေ အမြဲတမ်းစိုပြေနေအောင် အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်ကို နေ့တိုင်းလိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။
အမှုန့်ကြိတ်ထားတဲ့ အယ်လ်မွန်စေ့နဲ့ ပျားရည်အနည်းငယ်ရောပြီး ပေါင်းတင်တာမျိုးလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆီပြန်တတ်သူတွေအနေနဲ့ မျက်နှာနဲ့ ဆံပင်ထိတွေ့မှု နည်းအောင် ဆံပင်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး စည်းထားဖို့လိုပြီး မျက်နှာကိုလက်နဲ့ ခဏခဏပွတ်တာမျိုးလည်း ရှောင်ဖို့လိုသလို အလှကုန်တွေသုံးတဲ့အခါမှာလည်း အဆီပြန်တတ်တဲ့ အသားအရေအတွက် သီးသန့်ထုတ်တာမျိုး ရွေးချယ်သုံးစွဲဖို့လိုပါတယ်။
အဆီစုပ်စက္ကူလေးတွေ အကူအညီယူပြီးတော့လည်း တစ်ချိန်လုံးမျက်နှာ အဆီပြန်မနေအောင် လုပ်နိုင်ပါ တယ်။ မိတ်ကပ်ကြောင့်လည်း အဆီပြန်တတ်ပါတယ်။
With the onset of December, many young people are now thinking about how to wear winter fashions.
What can be done to cure the problem of insomnia, which is common among young people?
Do's and Don'ts for Gym Beginners
Foods that contain vitamins that can boost brain power
Where to use the useful aloe vera?
Types of shoes that men should own
Aung Myo Hein 28 Jun, 2021
Does filler injection really makeaperson beautiful? What about side effects?
Emergency Bag (b) What should be in an emergency bag?